ဥက္ကလာဟိုးမား WIC | JPMA, Inc
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအား Oklahoma WIC အစီအစဉ်သို့ကြိုဆိုသည်။ စျေးဝယ်အကူအညီလိုပါသလား အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ။ 405-549-3291 ၂၄/၇ ။ အကယ်၍ သင်နို့တိုက်ကျွေးရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ Oklahoma မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေး hotline သို့ဖုန်းဆက်ပါ 1-877-271- နို့ (6455) ဤနံပါတ်ကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီမိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုအတွက်သင်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည် နို့တိုက်မိခင်များ၊ ၄ င်းတို့မိသားစုများ၊ မိတ်ဖက်များ၊ အလားအလာရှိသောမိဘများနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအတွက်ဖြစ်သည်။ International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) မှပြန်လည်ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကို သင်တို့သည်လည်းငါတို့အကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် Virtual ကိုယ်ဝန်ဆောင်အိတ်အရင်းအမြစ်ကဒီမှာ.
သငျသညျ WIC အသစ်ဖြစ်ပါသလား ကျေးဇူးပြုပြီး Oklahoma ကိုကြည့်ပါ WIC စျေးဝယ်အချက်အလက်များ အောက်ကဗီဒီယို!
ဥက္ကလာဟိုးမား WIC စျေးဝယ်အချက်အလက်များဗီဒီယို
Q: ကျွန်ုပ်၏ WIC အစားအစာများ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) အားလုံးကိုရရန်လိုအပ်ပါသလား။
A: သင်၏ WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) များအားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တွင်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်မှသတ်မှတ်ထားသော WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) အားနည်းသောသို့မဟုတ်လုံးဝမရွေးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
A: WIC သက်သာခွင့်များပြောင်းလဲမှုအတွက်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ စတိုးဆိုင်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်အစားထိုးခြင်းမပြုရ။
Q: ကျွန်ုပ်၏ကလေးသို့မဟုတ် WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) ကိုကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုရှိအခြားသူများအားကျွန်ုပ်အစာကျွေးပါမည်လား။
A: WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) သည် WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) ကိုအထူးသတ်မှတ်ထားသောလူအတွက်သာဆိုလိုသည်။ သင့်အိမ်ရှိ WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) သည် WIC ထောက်ပံ့ပေးထားသောအစားအစာအချို့ကိုမစားပါကစတိုးဆိုင်သို့မသွားပါသို့မဟုတ် WIC ဆေးခန်း ၀ န်ထမ်းများအားသင်၏သတ်မှတ်ထားသော WIC သက်သာခွင့်များမှအစားအစာနှင့်ပုံသေနည်းကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။ ။
A: သငျသညျမှရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာဆွေးနွေးရန်သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။
Q- WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) ကိုသူတို့မသုံးရင်နောက်လသို့ပြောင်းလိမ့်မည်လား။
A: မရှိပါ။ ထိုလတွင် ၀ ယ်ယူခြင်းမရှိသော WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) သည်အလိုရှိသည် မဟုတ် နောက်လသို့သယ်ဆောင်ပါ
ထုတ်ကုန်များကို WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းတွင်၎င်းတို့ကိုဥက္ကလာဟိုးမား WIC အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်သေချာစစ်ဆေးပါ။ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်၏ eWIC ကဒ်တွင် WIC ခံစားခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။
သင် ၀ ယ်နိုင်သည့် WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) ကိုကြည့်ရှုရန် WICShopper (သို့မဟုတ်သင်ပုံနှိပ်ထားသော version) တွင်သင်၏ဥက္ကလာဟိုးမား WIC အတည်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်း (AFL) ကိုကြည့်ပါ။
Allowed - ဤပစ္စည်းကိုဥက္ကလာဟိုးမား WIC အတွက်ခွင့်ပြုသည်။ သိထားသင့်သည်တစ်ခုမှာသင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုခွင့်ပြုသည်ကိုသင်မြင်ကောင်းမြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကို WIC နှင့်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး သည် WIC သက်သာခွင့်များကိုနို့တစ်လုံးလုံးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်ကလေးသည်အသက် ၂ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါကနို့တစ်လုံးလုံးသည်သင်၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင်မှတ်ပုံတင်တွင်နို့တစ်လုံးလုံးမ ၀ ယ်နိုင်ပါ။ WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) သည် WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်အထိဤ“ ခွင့်ပြုထားသော” မက်ဆေ့ခ်ျသည်သင့်မိသားစု၏ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များ (အစားအစာနှင့်ပုံသေနည်း) နှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မ WIC ကို item - ဆိုလိုသည်မှာဥက္ကလာဟိုးမား WIC သည်ဤအရာကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအစားအစာကို WIC သက်သာခွင့်များ (အစားအစာများနှင့်ပုံသေနည်း) ဖြင့်ဝယ်ယူသင့်သည်ဟုသင်ထင်မြင်ပါက“ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!ဒီ app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို။
အင်္ဂလိပ် WIC အစားအစာစာရင်း
ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အဆင့်မြင့် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးရောဂါသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်များကို WIC အာဟာရနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအားပိုမိုနားလည်စေရန်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ သုံးစွဲသူများသည်ဤ site တွင်တွေ့ခဲ့ဖူးသောအရာကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်းကိုနှောင့်နှေးခြင်းမပြုရပါ။ အာဟာရဗေဒပညာရှင်များ၊ ဆေးသမားများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်အခြားနေရာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့်ဤ site ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ မည်သည့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဤဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကိုကိုးကားခြင်းအားအိုကလာဟိုးမားကျန်းမာရေးနှင့်အဆင့်မြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်ဌာနသည် ၄ ​​င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အခြားဆိုဒ်များတွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဌာနအားတာဝန်မယူနိုင်ပါ။ ဤဆိုဒ်များတွင်ထိုးစစ်သတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းအသိပေးအကြောင်းကြားပါမည် အီးမေးလ်က.